Wafdi ka socda Kenya oo Muqdisho ka gaaray & Shariif Sh Aadan oo kusoo laabtay Muqdisho – SBC
Wafdi ka socda Kenya oo Muqdisho ka gaaray & Shariif Sh Aadan oo kusoo laabtay Muqdisho
Posted by Webmaster on April 22, 2012 Comments
Magaalada Muqdisho maanta waxa agaaray Wafdi ka socda Dowlada Dalka Kenya oo uu horkacayo wasiir ku xigeenka arimaha dibadda dalkaaasi iyo xubno kale oo ka tirsan Wafdigiisa.
Garoonka diyaaradaha soo dhaweyn loogu sameeyay wafdigan ka dib waxaa ay u soo gudbeen dhanka madaxtooyada DKMG ah siiba xafiiska madaxweynaha DKMG ah halkaasi oo ay kulan kula yeesheen wafdigan Madaxweynaha DKMG ah ee Soomaaliya.
Kulanka dhexmaray labada dhinac ayaa ahaa mid waqti qaatay kaasi oo loogaga hadlay sida wararka aanu ku heleyno arimo quseeya gobolka siiba Soomaaliya iyo sidii dowlada Kenya ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugaga furan laheyn caasimada Dalka Safaaradoodii.
Richard Onyoinga Waa wasiir ku xigeenka wasaarada arimaha dibadda dalka kenya waxaana uu u sheegay saxaafada ka dib kulankii uu la qaatay madaxweynaha DKMG ah isagoona sheegay in kulankaasi waxyaabahii la isku soo qaaday ay dhamaantood ahaayeen kuwo ku aadan xaalada gobolka iyo Arimaha Soomaaliya, isagoona xusay in dowlada kenya ay marwalba diyaar u tahay caawinta DKMG ah dhowaana ay safaaradeeda ka furaneyso Soomaaliya.
Dhinaca kale waxaa isna maanta gaaray magaalada Muqdisho Gudoomiyaha baarlamanka DKMG ah ee Soomaaliya mr Shariif xasan Sh Aadan halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay,
Gudoomiyaha ayaa ka yimid safaro uu ku kala bixinayay wadamada deriska siiba dalka Kenya halkaasi oo uu kulamo kula soo qaatay dhinacyo kala duwan, isagoo kala hadlay arimo quseeya DKMG ah ee Soomaaliya.
SBC International Muqdisho